Waxaan Soo Arkay Alessandro Nesta, Franco Baresi, Paolo Maldini, Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi....Balse Waligay Maan Arag Matthijs de Ligt Oo Kale. - Gool24.Net
Waxaan Soo Arkay Alessandro Nesta, Franco Baresi, Paolo Maldini, Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi….Balse Waligay Maan Arag Matthijs de Ligt Oo Kale.
Tayada difaaca da’yarta ah ee xulka qaranka Netherlands iyo kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt ayaa noqday mid kooxaha Yurub oo dhan laga dareemay waxaana tartan badan kadib hadda u muuqata Juventus in ay saxiixa xidigan ku guulaysanayso.
Inkasta oo ayna wali Juventus wax heshiis ah la gaadhin kooxda Ajax, haddana waxay awooday in ay Mino Raiola iyo Matthijs de Ligt ku qanciso dalabka shaqsiga ah iyada oo hadda uu wada xaajood u socdo Ajax iyo Juventus.
Laakiin Marcello Lippi ayaa si aan hore loo arag u amaanay Matthijs de Ligt wuxuuna sheegay in uu soo arkay Alessandro Nesta, Franco Baresi, Paolo Maldini, Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro iyo Marco Materazzi balse aanu soo arag xidig De Ligt la mid ah marka loo qiimeeyo da’da uu hadda yahay.
Marcello Lippi ayaa sheegay in aanu waligii soo arag xidig 19 sano jir ah oo leh tayada difaac ee De Ligt wuxuuna u muuqday mid si wayn ula yaaban waxa uu da’yarkan soo muujiyay.
Marcello Lippi oo Juventus ku taageeraya saxiixa De Ligt ayaa yidhi: “Anigu waxaan aaminsanahay in ciyaartoyga saxiixa ugu fiican u noqon kara Juventus in uu yahay De Ligt”.
“Waxaan filayaa in uu xaqiiqdii xoogan yahay oo uu jidh ahaan ku soo rogayo isla markaana uu leeyahay maskax furnaan kubbada cagta ah, waxa uu ku siinayaa isku dheeli tirnaan fiican, farsamo ahaan ayuu u xoogan yahay, wuxuuna dhaliyaa goolal badan” ayuu Marcello Lippi hadalkiisa sii raaciyay.
Tababaraha koobka aduunka ku soo guulaystay ee Marcello Lippi ayaa la waydiiyay ciyaartoyda uu De Ligt isaga xusuusiyo wuxuuna sheegay hadal cajiib ah.
Marcello Lippi oo cida uu ku xusuusto De Ligt ka jawaabaya ayaa yidhi: “Ma jirto baahi loo qabo isbarbar dhig, laakiin kuwo badan oo fiican ayaan soo arkay sida Alessandro Nesta, Franco Baresi, Paolo Maldini, Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro iyo Marco Materazzi, anigu waligay maan soo arag qof da’diisa oo kale sidaas ku ah”.
Marcello Lippi ayaa aaminsan in Juventus oo isla heshay De Ligt,Giorgio Chiellini iyo Leonardo Bonucci in ay xoojin wayn kooxda u samayn doonto isla markaana ay gaadhi karaan bartilmaameedkooda ku guulaysiga Champions league.